प्रस्तावित राजदूतको प्रतिवद्धता : युरोपमा नेपाली वायुयानको उडान
२५ भदौ, काठमाडौं । विहीबार जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भए ।
सुनुवाइका क्रममा उनीहरुले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्नेदेखि दाताले दिने रकम सरकारी च्यानलमार्फत ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
विगत पाँच वर्षदेखि नेपालको हवाई उडान क्षेत्र युरोपेली संघ (ईयू)को कालोसूचीमा छ ।
ईयू अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । नेपालले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ईयूले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन ।
विहीबार सुनुवाइका क्रममा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारीले भने यो विषयलाई आफूहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘मेरो स्पेसल टास्क छ । जसअन्र्तगत नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको खतरासूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछु । आफ्नो कार्यकालमा युरोपको आकाशमा नेपालको हवाइ उडान गराउन पहल गर्छु’ प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले भने ।
विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले यसअघिका राजदूतले पनि त्यही प्रतिवद्धता जनाएको सम्झिए । ‘यसअघिका राजदुतले पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउँछु भन्नुभएको थियो । तर, गर्न सक्नुभएन । तपाईंले भन्नुभयो । गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भन्नुभयो भने विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्न सुझाव दिए ।
जवाफमा राजभण्डारीले आफूले काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘यहाँहरुले भन्नुभयो पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्नु, मैले त गरिसकेँ । डकुमेण्टहरु जम्मा गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु’ राजभण्डारीले भने ।
जर्मनी ईयूको महत्वपूर्ण सदस्य भएको उल्लेख गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत खड्कालाई पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्न सुझाव दिए ।
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत खड्काले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सकिने विश्वास आफुलाई रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपालको वायुसेवालाई खतराको सूचीबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उनले ईयूको कालोसूचीबाट पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०१३ बाटै आईकाओले नेपालको हवाई उडानलाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । तर, उसले सन् २०१७ जुलाईबाट त्यसलाई हटाइसकेको छ । तर, ईयूले कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यो रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।
दाताको सहयोग सरकारी च्यानलबाट
जर्मनी, बेल्जियम र युरोपियन युनियन नेपाललाई सहयोग गर्ने दाता राष्ट्र हुन् । त्यस्ता सहायता रकम नेपाल सरकारको माध्यमबाट र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ, आइएनजीओ) मार्फत खर्च हुने गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइका बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले युरोपियन युनियनबाट आउने सहायता सरकारी माध्यमबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना सुनाए ।
‘विदेशी साहायता ६० प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टम भएर आउँछ । ४० प्रतिशत बिभिन्न एनजीओ, आइएनजीओमार्फत आएर खर्च भएका छन्’ आफ्नो कार्ययोजना सुनाउने क्रममा राजभण्डारीले भने ।
उनलाई सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सोधे, ‘सबै विदेशी साहायता रकम सरकारी च्यानलबाटै कसरी खर्च गराउने हो ? यसका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?’ तर, प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीले जवाफ दिएनन् ।
जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकाजी खड्कालाई भने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विदेशले सहायता रकम खर्च गराउने प्रवृत्तिमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गरे ।
‘डोनर राष्ट्रले सरकारी संयन्त्र भन्दा बढी एनजीओ, आइएनजीओ मार्फत सहायता रकम खर्च गर्ने गर्छन्, यो राम्रो भइरहेको छैन । सबै सहायता रकम सरकारी संयन्त्रमार्फत नै खर्च गर्ने सन्र्दभमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?’जवाफमा प्रस्तावित राजदूत खड्काले यो विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने बताए । तर, सजिलो भने नरहेको उनको जवाफ छ ।
‘यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छु । तर, विदेशी डोनर राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका युनिसेफ, रेडक्रस जस्ता संस्थामार्फत साहायता रकम खर्च गराउने हो । अब सरकारी च्यानलबाट नै खर्च गराउनका लागि पहल गर्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।’
प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न : भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुधार्न के गर्नुहुन्छ ?
प्रस्तावित राजदूतको नाम सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन
Realme7Pro vs Xiaomi Poco X3: Price in Nepal, Specs and Features
दिनमै १७ जनाले गर्छन् आत्महत्या, मनोविश्लेषक भन्छन्–अनाहकमा ज्यान नफाल्नुस्
Your next steps if the JobKeeper reduction leaves you short – ABC Life
Royal Melbourne, St Vincent’s hospitals had more than 100 healthcare workers infected with coronavirus
Categories Select Category Auto (367) Blog (3) English (874) Entertainment (482) Finance (841) Nepali (9,090) Sports (6,046) Tech (1,574) World (3,166)